लेनोभो K320t: १ low: screen स्क्रीनको साथ नयाँ कम-अन्त Androidsis
लेनोभो K320t पूर्ण चश्मा प्रकट भयो
ईडर फेरेनो | | लेनोभो, मोबाईलहरू
लेनोभो एक ब्रान्ड हो जुन धेरै प्रयोगकर्तालाई परिचित लाग्दछ। जे होस्, तिनीहरू मुख्य रूपले कम्प्युटरहरू बनाउनको लागि परिचित छन्। तर फर्मले लामो समयदेखि स्मार्टफोनहरू बनाउँदै आएको छ, केहि उनीहरूले गर्न जारी राख्दछन्। ब्रान्डले भर्खर २०१ 2018 को लागि पहिलो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। यस बर्षको पहिलो स्मार्टफोन, लेनोभो K320t पहिले नै एक वास्तविकता हो.
यस उपकरणको साथ फर्म एक उत्कृष्ट प्रवृत्तमा सामेल हुन्छ जुन हामीले २०१ 2017 मा बजारमा देख्यौं। तपाईं मध्ये धेरैले अनुमान गरिसक्नु भएको छ, यो लेनोवो K320t को पनि १:: ratio अनुपातको फ्रेम बिना फ्रेम छ। त्यसैले हामी २०१ types मा यी प्रकारका पर्दा देख्नेछौं।
यो उपकरण कम वा मध्य-कम दायरा पुग्छ। त्यसैले हामी क्रान्तिकारी उपकरणको आशा गर्न सक्दैनौं। यद्यपि यो याद गर्नुपर्दछ कि यसको एक छ राम्रो डिजाइन र चश्मा खराब छैन। त्यसोभए यो एक उपकरण हुनसक्दछ जुन यसको दायरामा अरुबाट बाहिर देखिन्छ।
हामी तपाईंलाई यससँग तल छोड्दछौं यस लेनोभो K320t को पूर्ण विशिष्टता:
अपरेटिङ सिस्टम: Android .7.0.०। नौगट
स्क्रिन:5इन्च IPS HD +
प्रोसेसर: १.1,3 GHz क्वाड-कोर स्प्रिडट्रम
राम:2जीबी
आन्तरिक भण्डारण: १ GB जीबी (माइक्रोएसडी मार्फत विस्तार योग्य)
फ्रन्ट क्यामेरा: अपर्चरf/ 8 संग १ 2.2 MP
रियर क्यामेरा: अपर्चरf/ 8 रf/2र LED फ्ल्यासको साथ डबल 2.0 +2.2 MP
ब्याट्री: 3.000 एमए
आयामहरू: 155,2 एक्स 73,5 एक्स 8,5mm
वजन: 153,8 ग्राम
अरूलाई: LTE, WiFi, microUSB 2.0, dualSIM, BT 4.1, 3.5mm जैक, रियर फिंगरप्रिन्ट रिडर
यस उपकरणको साथ हामी देख्छौं कि केहि बजार प्रवृत्तिहरू पहिले नै सस्तो उपकरणहरूमा पुगेको छ। जस्तो यो लेनोवो K320t मा एक स्क्रीन छ 18:9अनुपात संग र एक डबल रियर क्यामेरा भी छ। त्यसैले फर्मले चीजहरू राम्रोसँग गर्न खोजेको छ।
फोन छ अब कालो मा चीन मा उपलब्ध छ। यसको सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय रिलीजको बारेमा केहि पनि खुलाइएको छैन, त्यसैले यो केवल चीनमा जारी हुन सक्छ। यो लेनोभो K320t को मूल्य 999 युआन छ, जुन लगभग १२eयूरो हो. तपाइँ लेनोभो उपकरणको के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » लेनोभो » लेनोभो K320t पूर्ण चश्मा प्रकट भयो
तपाईं ब्ल्याकभ्यू S8 को बारे के सोच्नुहुन्छ? यो मूल्यमा मैले खोजिरहेको कुराको लागि फिट हुन्छ, € १२127 को लागि यो अचम्मको देखिन्छ। कसैसँग यो छ?
SHARP Aquos S3 (FS8032) ताइवानमा प्रमाणित छ
नोकियाले २०१ for को लागि छ नयाँ नयाँ Android फोनहरू तयार गर्दछ